နေ့စွဲ : 2021-01-14
အမည် : Editor Byul
လတ်တလော ကျော်ြကားသောအရာများ : 56
SSK Korean Editor Byul New Brand Review!
Hello~! SSK Lovelies တို့ရေ Editor Byul ဖြစ်ပါတယ်~
ဒီနေ့ product အသစ်လေးတွေရောက်လို့ test လုပ်ကြည့်ရင်း Byul အရမ်းသဘောကျသွားတဲ့ BMBCO Gold Serum နဲ့ Eye Cream အကြောင်းလေး မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်
အခုတလော Byul မျက်စိကျနေတဲ့ Skincare ပိုင်းကတော့ Anti-aging ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တင်းရင်းမှုမရှိပဲ အရေးအကြောင်းတွေပါ ထွက်လာရင် အသက်ကြီးတယ်လို့ ထင်ကိုထင်ရတယ်နော် Skin လေးကလည်းတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ မျက်နှာလေးလင်းနေရင် (၁၀)နှစ်လောက် ငယ်သွားတယ်လို့ထင်ရတာတော့ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ ဒါမယ့် ဒီလို skin မျိုးရဖို့ဆိုရင် တစ်မနက်ခင်းတည်းနဲ့ မပြီးဘူးနော် နေ့တိုင်း skincare နိုင်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါ ဒါကြောင့် Editor Byul က အသားအရည်တင်းတင်းရင်းရင်းလေးနဲ့ Glow စေမယ့် Anti-aging product လေးကို သေချာရှင်းပြပေးမယ်နော်
ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ BMBCO Gold Serum လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ရွှေက အရေးအကြောင်းအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ingredient ဆိုတာသိကြတယ်ဟုတ်??!! ဒီ BMBCO Gold Serum လေးမှာ 24k Gold 500ppm တောင် ပါဝင်ပါတယ်နော် (တခြား Product တွေထက် 2~8 ဆလောက်ထိ ပိုပြီးပါဝင်ပါတယ်)
နောက်ပြီးတော့ သဲကန္တာရနှင်းဆီလို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်တဲ့ Resurrection Plant ရဲ့ အဆီအနှစ်တွေပါဝင်တာကြောင့် skin ကို မြန်မြန် calm ဖြစ်စေပြီး အခုလို Mask အသုံးများလို့ sensitive ဖြစ်ချင်နေတဲ့ skin တွေအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်နော် (wow wow ပါ )
နောက်တစ်မျိုးကတော့ Queen79 Noble Gold Eye Cream ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီ eye cream လေးမှာလည်း Resurrection Plant နဲ့တခြားသော Natural Ingredients တွေ ပါဝင်လို့ Skin Barrier ကိုလည်းခိုင်ခံ့စေပြီး မျက်လုံးနားကို အစိုဓာတ်ဖြည့် တင်းတင်းရင်းရင်းလေးဖြစ်စေပါတယ်
နေ့တိုင်း မနက်နဲ့ည မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း တိုနာကို cotton pad နဲ့ပွတ်လိမ်း ပြီးမှ Serum - Eye Cream - Moisturizing Cream အစဉ်လိုက်လေးလိမ်းပေးနော်
အထူးသဖြင့် ညဘက်ဆိုရင် Eye Cream ကို မျက်လုံးနားတင်မဟုတ်ပဲ Slime line နဲ့ နဖူးအရေးအကြောင်းအတွက်ပါ လိမ်းပေးလို့ရလို့ Anti-wrinkle Special Care Item လေးလို့တောင် ခေါ်လို့ရနေပြီ
Queen79 Noble Gold Serum 114,400ks > 89,900ks
Queen79 Noble Gold Eye Cream 49,400ks > 38,900ks